Drugs To Avoid In Pregnancy – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သငျကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာ ရှောငျသငျ့တဲ့ ဆေးတှေ
သငျ့ရဲ့ကိုးလတာ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျဟာ…. သငျ့အတှကျတော့ ကိုးလပမေယျ့ သငျ့ကလေးအတှကျတော့…. တဈဘဝလုံးပါ
သငျ့ရဲ့စောငျ့ရှောကျမှူမှနျကနျခဲ့ရငျ…. သငျ့ကလေးကောငျးကောငျးမှနျမှနျဖှံ့ဖွိုးကွီးထှား မှေးဖှားလာမှာဖွဈပွီး….. မသုံးသငျ့တဲ့ဆေးဝါးတှကေို သငျသုံးမိခဲ့မယျဆိုရငျတော့… ဒါနဲ့ ဆနျ့ကငျြဖကျဖွဈသှားနိုငျပါတယျ….
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာ သငျရှောငျသငျ့တဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ ဓာတုပစ်စညျးတှကေတော့ ဒီမှာပါ….
(1) အရကျ§၊ ဆေးလိပျနဲ့ ဆေးရှကျကွီး
(2) ဆေးခွောကျ§၊ ကိုကငျး§၊ ဟီးရိုးအငျးအပါအဝငျ မူးယဈဆေးတှေ
(3) ပွဒါး (mercury) ၊ ဓာတျရောငျခွညျ (x’ ray) နဲ့ အခြို့သော ဆံပငျဆိုးဆေး၊ ဖွောငျ့ဆေး၊ ကောကျဆေးတှေ
(4) ကငျဆာကုသရာမှာသုံးတဲ့ဆေးဝါးမြား… ဥပမာ Aminopterin
(5) အခြို့သော သှေးပေါငျကဆြေးမြား…. ဥပမာ Enalapril, Perindopril, Ramipril
(6) အခြို့သော ဝကျခွံပြောကျဆေး ဥပမာ Isotretinoin
(7) ဗီတာမငျ အေ (ပမာဏမြားမြား သောကျမိလြှငျ)
(8) အခြို့သော ပိုးသတျဆေးမြား… ဥပမာ….Norfloxaccin
(9) Warfarin (သှေးကွဲဆေး)
ဥပမာ… phenothiazine, lithium, diazepam
ဥပမာ…. phenytoin, valporic acid, trimethadione
(12) ဟျောမုနျးဆေးမြား…( ကြားဟျောမုနျး မဟျောမုနျး)
ခုလောကျဆိုရငျ… ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာ မသုံးစှဲသငျ့တဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ ဓာတုပစ်စညျး တှကေို အကွမျးဖဉျြး သိရှိရှောငျကွဉျနိုငျလောကျမယျ ထငျပါတယျ….
အကောငျးဆုံးကတော့… ကိုယျဝနျဆောငျတှေ သောကျသုံးမယျ့ ဆေးဝါးတှကေို သိနားလညျတဲ့ ဆရာဝနျနဲ့ သခြောတိုငျပငျပွီးမှ သောကျသုံးသငျ့ပါကွောငျး……
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ရှောင်သင့်တဲ့ ဆေးတွေ
သင့်ရဲ့ကိုးလတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဟာ…. သင့်အတွက်တော့ ကိုးလပေမယ့် သင့်ကလေးအတွက်တော့…. တစ်ဘဝလုံးပါ
သင့်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှူမှန်ကန်ခဲ့ရင်…. သင့်ကလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွား မွေးဖွားလာမှာဖြစ်ပြီး….. မသုံးသင့်တဲ့ဆေးဝါးတွေကို သင်သုံးမိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့… ဒါနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်….
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ သင်ရှောင်သင့်တဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကတော့ ဒီမှာပါ….
(1) အရက်§၊ ဆေးလိပ်နဲ့ ဆေးရွက်ကြီး
(2) ဆေးခြောက်§၊ ကိုကင်း§၊ ဟီးရိုးအင်းအပါအဝင် မူးယစ်ဆေးတွေ
(3) ပြဒါး (mercury) ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည် (x’ ray) နဲ့ အချို့သော ဆံပင်ဆိုးဆေး၊ ဖြောင့်ဆေး၊ ကောက်ဆေးတွေ
(4) ကင်ဆာကုသရာမှာသုံးတဲ့ဆေးဝါးများ… ဥပမာ Aminopterin
(5) အချို့သော သွေးပေါင်ကျဆေးများ…. ဥပမာ Enalapril, Perindopril, Ramipril
(6) အချို့သော ဝက်ခြံပျောက်ဆေး ဥပမာ Isotretinoin
(7) ဗီတာမင် အေ (ပမာဏများများ သောက်မိလျှင်)
(8) အချို့သော ပိုးသတ်ဆေးများ… ဥပမာ….Norfloxaccin
(9) Warfarin (သွေးကြဲဆေး)
(12) ဟော်မုန်းဆေးများ…( ကျားဟော်မုန်း မဟော်မုန်း)
ခုလောက်ဆိုရင်… ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ မသုံးစွဲသင့်တဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ ဓာတုပစ္စည်း တွေကို အကြမ်းဖျဉ်း သိရှိရှောင်ကြဉ်နိုင်လောက်မယ် ထင်ပါတယ်….
အကောင်းဆုံးကတော့… ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ သောက်သုံးမယ့် ဆေးဝါးတွေကို သိနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီးမှ သောက်သုံးသင့်ပါကြောင်း……
Nail Prick Injury